TCCA သည်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျယ်ပြန့်သောစက်မှုပိုးသတ်ဆေး၊ bleachingagent နှင့်အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုအတွက်ဓါတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
အသုံးပြုမှုအရ Powder / Granular / Tablet သုံးခုရှိသည်
1. အသွင်အပြင်: အဖြူရောင်တက်ဘလက်
2. ရရှိနိုင်ကလိုရင်း: 90,00% MIN
3. အစိုဓာတ်: 0.50% MAX
4. 1% ရေဖြေရှင်းချက် PH: 2.7-3.3
WE 50KGS ပလပ်စတစ်ဗုံ၊ 20KGS FIBER CARTONS ETC ၏ထုပ်ပိုးမှုရှိသည်။
ကယ်လ်စီယမ်ဟိုက်ပိုလိုရိုက် ၆၅% ၇၀%
ထုတ်ကုန်တွင်ရရှိနိုင်သောကလိုရင်းကြောင့်ကယ်လ်ဆီယမ်ဟိုက်ပိုကလစ်သည်ပိုးသတ်ဆေး၊ အရောင်ချွတ်ဆေးသို့မဟုတ် oxidant အဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ ဘူတာ၊ အိမ်နှင့်စသည်တို့စသည်တို့ကိုကောင်းမွန်သောအရောင်ချွတ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းစက္ကူနှင့်ဆိုးဆေးလုပ်ငန်းများတွင်တွေ့ရသည်။
Cerium oxide polishing အမှုန့်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး optical ဖန်ထည်၊ LCD၊ Touch Panel နှင့် Photo Mask တို့တွင်ဆေးကြောရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုပါသည်။
OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက် (PHMB)
PHMB သည်ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများနှင့်ဘက်တီးရီးယားအစွန်းရောက်ပေါ်လီမာများပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရေငွေ့ဖြေရှင်းမှုတွင်အိုင်းယွန်းလ်ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်း၏ hydrophilic အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအားကောင်းတဲ့အပြုသဘောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပါရှိသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြစ်သောဘက်တီးရီးယားများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးမျိုးကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးဆဲလ်အမြှေးပါးထဲသို့ ၀ င်နိုင်သည်။ အမြှေးပါးအတွင်းရှိ liposomes ၏ပေါင်းစပ်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည်၊ ဆဲလ်များကိုသေစေနိုင်သည်။
မော်လီကျူးပုံသေနည်း: C 433,038 (C8H17N5) n.xHCl မော်လီကျူးအလေးချိန်
ဆိုဒီယမ်လော်ရီးယပ်စ်နောက်ထပ် ၇၀% (SLES)
99.5% MIN ဆန်းစစ်ပါ
မော်လီကျူး 39.5% MIN
ကလိုရင်း 0.02% MAX
ဆာလဖိတ် 0.2% MAX
ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော ၀.၁% MAX
ထုတ်ကုန်အမည် BARIUM ကလိုရိုက် DIHYDRATE
CAS NO ။ 10326-27-9
သန့်ရှင်းမှု 99.0% MIN ။
Kalcium 0.036% MAX ။
ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောကိစ္စများ MAX ၀.၅၅% ။
SULFIDES 0,003% MAX ။
ဆိုဒီယမ် 0,20% MAX ။
သံ (Fe) 0.001% MAX ။
မုန့်ညက်, ကိတ်မုန့်, ​​pastries, မုန့်ဖုတ်ထုတ်ကုန်အမြောက်အများအေးဂျင့်အဖြစ်ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ကိုအစားထိုး,
deacidifying pH ကိုပြုပြင်နှင့်အချဉ်ဓာတ်ကိုလျှော့ချသည်,
wort သို့မဟုတ်ဝိုင်တွင်ပေါင်းထည့်ပြီး၎င်းသည် tartaric acid နှင့်ဓာတ်ပြုပြီးပိုတက်စီယမ် bitartrate ကိုထိရောက်စွာပျော်ဝင်စေခြင်းမရှိပါ။